Ingabe Ukulungele ukubamba A Pet?
Igcine ukubuyekezwa: May. 20 2019 | 2 imiz ufunde
Something ngaqaphela ngenkathi waseyunivesithi kwaba nenani labantu Ngangazi ukuthenga kanye / noma ukwamukela ezifuywayo. Kwadingeka nabangane nabantu obajwayele ukuthi base ezuza zonke izinhlobo ezahlukene ezifuywayo phakathi neminyaka yabo post-secondary education-cats, izinja, izinyoni, fish, onogwaja, onogwaja ngisho embizeni nesisu izingulube.
Kungaba kubonakale zikhange kakhulu phelile futhi uthole pet kodwa wena ucabanga ukuzibophezela eliza kanye isilwane? Yebo, isilwane sakho uthando nawe ngokungenamibandela futhi ube khona nawe ngesikhathi bonke eliphezulu nezibuhlungu zokuphila, kodwa benza zidinga impela kancane ukunakekelwa. Nanka amathiphu ambalwa ukukusiza ukunquma uma usukulungele:
Izilwane ezifuywayo a izibopho ezingokwezimali
Ezinye ezifuywayo kungaba izindleko ongaphakeme futhi ezinye ezifuywayo ungaqala aphansi kodwa kancane kancane abiza eshisiwe encane. Eminyakeni edlule, inja yami ayekade nokugcinwa kahle kulula. Nguye a inja encane, ngakho ukudla kwakhe eyanele yayincane futhi kwakuqabukela ukuba ahambele udokotela wezilwane. Nokho, yena cishe 15 futhi manje nabagulayo futhi. Imithi sakhe samlahlekisela nengalo umlenze njalo ngenyanga. Like abantu, izilwane bayagula kungakhathaliseki ubudala noma yokuphila. Ungakumela Shell out the imali, kanye isikhathi isilwane sakho? Lokhu kuyinto okumele kubhekwe.
Izilwane ezifuywayo ukuzinika isikhathi
Nakuba abanye ezifuywayo kuthiwa "nokugcinwa low" kusadingeka isikhathi uzibophezele kuwo nsuku zonke. Feeding, nokuzilungisa umzimba nje izinto ezimbalwa ukucabangela lapho kuziwa ukunakekelwa nsuku zonke isilwane. Uma usohambweni njalo noma ukuchitha isikhathi esengeziwe esikoleni noma emsebenzini ke ekhaya, kungaba umqondo omuhle ukuba uyeke ukuthola isilwane okwamanje. Kungaba umthwalo kwabanye uma njalo becela ukuba ukuphulula-ahlale izilwane zakho ngenkathi wena away. Mhlawumbe lapho ukuphila kwakho kuba kuxazululwe kungaba isikhathi prime ukuthola isilwane.
Izilwane ezifuywayo ukuzibophezela eside
Nakuba isilwane ingase ifanelane ukuphila kwakho kwamanje, bayo- ngonyaka ozayo? In 5 Eminyakeni? In 10 Eminyakeni? Ngiyaqonda nesifiso isilwane, kodwa ukwamukela ukuthi izilwane ukuzibophezela eside kuyadingeka. Abantu abaningi lokho ngiyazi ababenolwazi ezifuywayo kwadingeka ukuba uziyeke kamuva phansi endleleni ngoba wayengasakwazi babanakekele. Ayenesizathu ukuthi pet ngesikhathi esikoleni kodwa once baba ngompetha futhi wathuthela edolobheni elisha noma ifulethi ukuhamba isilwane yabo nabo. It is a isinqumo akekho ofuna ukwenza, kokuba ahlukane isilwane yabo ethandekayo, okwesikhashana noma unomphela. Similar nokuzibophezela isikhathi, mhlawumbe kufanele ulinde kuze ukuphila kwakho kancane kancane okumatasa.
Out Ngakho ngaphambi kokuba uya futhi wamukele isilwane, ukwenza ucwaningo lwakho ucabange izinhlelo zakho ngekusasa. Bheka singene uhlobo pet ufuna, lokho okudingekayo ukuze athathe kahle ukunakekelwa wabo futhi uma lezo zimfuneko uvumelane yokuphila wakho wamanje. Akukho lutho olungalungile ngokulibala ukuthola isilwane kuze ngomumo yakho, kanjalo cha sukela isinqumo.